🥇 ▷ Waxaan ku tijaabinay Disney + Android: kani waa adeegga qulqulka Disney & # 039; s ✅
Disney + waa adeegga qulqulka cusub ee shirkadda weyn ee madadaalada. Muddo bilooyin ah ayaa madalkan si rasmi ah loogu dhawaaqay oo bishii Ogosto ee la soo dhaafay dhammaan faahfaahinta muhiimka ah ee ku saabsan waxaa la muujiyay, sida qiimaha soo-saarkiisa, kaas oo ballan qaadaya inuu ka mid yahay xooggeeda. Kaliya waxay ku kici doontaa 6.99 euro bishii, marka lagu daro inay la jaan qaadi karto Android, Android TV ama Chromecast aaladda kale.
Gudaha ‘Free Android’ waxaan awoodnay inaan iskudayno Disney + taleefanka Android, inaad karti u leedahay inaad sidan u aragto waxkastoo adeegga qulqulka shirkaddan Mareykan ah uu na siin doono. U tartamid aad u khatar badan shirkadaha sida Netflix, Amazon, HBO ama Apple TV +, oo iyaguna deyrtaas u taga suuqa.
Disney + waxaa laga heli doonaa Android, Android TV iyo Chromecast qiimo qiima badan Disney + waa mid ka mid ah adeegyada qulqulka ugu badan. Codsiga ayaa marka hore la jaan qaadi doona Android, Android TV iyo Chromecast.
Markaa ayaan kuu sheegeynaa Khibradayada adeegsiga adeeggan ee shirkadda Mareykanka. Waxaan diirada saareynaa dhinacyada muhiimka ah sida buugga macluumaadka la heli karo, isuduwaha soo bandhigaya dalabka ama howlaha aan ku leenahay. Waxaas oo dhami waxay naga caawin doonaan inaan waxbadan ka ogaano Disney +.
Kani waa is dhexgalka Disney +
Farsamaynta ay soo bandhigtay adeeggan qulqulka ayaa runtii ku habboon in la isticmaalo. Shaashadda guud waxaan ka helnaa dhammaan waxyaabaha ku jira, dhammaantood waxay ku habeysan yihiin qaybo. Marka hore waxaan dooran karnaa shirkadda ama santuuqa aan rabno inaan aragno waxyaabaha noocaas ah (Disney, Pixar, Marvel, iwm). Waxaan sidoo kale leenahay qaybo kala duwan oo waxyaabaha kujira lagu soo bandhigi karo.
Qeybaha sida filimada caanka ah, taxanaha Disney Channel, taariikhiga, dokumentiyada iyo waxyaabo kaloo badan. Waxaas oo dhan waxay ka dhigayaan baarista Disney + wax aad ugu fudud adeegsadayaasha. Haddii uu jiro filim ama taxane aan rabno inaan aragno, dhagsii oo keliya. Waxay nagu qaadaysaa daaqad halkaas oo aan ku haysanno macluumaad gaar ah oo ku saabsan filimkaas ama taxanaha oo aan ku ciyaarno waa inaad kaliya riixdaa batoonka ciyaarta. Sidoo kale waxaa naloo soo bandhigay suurtagalnimada in lagu soo dejiyo, inkasta oo tan loo baahan yahay waa inaan helno WiFi karti leh waqti walba.
Disney + waxaan ka soo dejisan karnaa waxyaabaha khad toos ah
Codsiga waxaa loo qaybin karaa afar qaybood oo waaweyn, kaas oo aan ku heli karno salka shaashadda. Dhinaca kale waxaa jira Guri, halkaas oo aan ka helno dhammaan waxyaabaha ku jira qaybaha aan soo sheegnay. Kadibna waxaa jira qaybta Raadinta, haddii aan rabno inaan raadinno waxyaabo gaar ah. Feylka saddexaad waa faylka Downloads, meesha aad ku maamuli karto dhammaan waxyaabaha aan ka soo dejisanay Disney +, kuwii la soo dejiyey ama kuwa ku jira hawsha la soo dejinayay ayaa lagu muujiyey kiiskaas. Qeybta ugu dambeysa waa Profile-ka, halkaasoo lagu maareeyo astaamahayaga ama lagu daro mid cusub.
Markaan galno bogga taxanaha ama filim, waxaan helnaa xog kala duwan. Tixraac kooban ayaa laga bixiyaa, marka lagu daro helitaanka xaaladaha badankood si loo helo waxyaabo dheeraad ah, sida trailer, muuqaallo tirtiray ama fiidiyow yar oo ka dambeeya kamaradaha ka gadaal. Faahfaahin farsamo ayaa sidoo kale la bixiyaa, sida cidda agaasime waa, sanadka sii deynta ama nooca filimka ama taxanahaas. Waxaan uheli doonnaa xogtan si sahlan.
Adeeg dheecaan ah iyo adeeg aan kala go ‘lahayn
Qaybta ugu muhiimsan ee codsiyada noocan ahi waa in hawlgalkeedu yahay mid dareeraha ah. Nasiib wanaag, Disney + ayaa si fiican wax u qabata marka loo eego arrintan, oo leh qalliin sahlan oo dheecaan ah waqti kasta. Duulista gudahood codsiga waa mid aad u deggan oo ma jiraan carqalado, ma qaboojiso ama waqti ayey qaadataa in lagu soo daro waxyaabaha ku jira. Xitaa jilitaanka filimku si dhakhso leh ayey u shaqeeyaan ku jira, waayo-aragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah. Mana jirin wax carqalad ah oo ka dhex jiray markii la isticmaalay.
Baadhitaanadu si dhakhso leh ayey u socdaan arjiga gudahooda, taas oo kuu oggolaaneysa inaad isla markiiba wax isla ogaatid. Sidoo kale soo-dejimaha ayaa si dhakhso leh loo fuliyaa, midkoodna ma faragelin muddada aan u adeegsaday dalabka, marka lagu daro awood u lahaanshaha soo dejiso dhowr filim isla waqti isku mid ah adoo aan ka sii shaqeynin ama gaabinaya. Shaqo fiican ayaa ka jirta shirkadan.
Disney on Android: barnaamijyada iyo cayaaraha ugufiican xiiso Ma u haysaa ciyaaraha Disney ee ugu fiican ama barnaamijyada loogu talagalay Android? Qodobkaan waxaan kaaga tageynaa xulashooyinka ugu wanaagsan.
Xakamaynta dib u soo celinta
Dib u soo noqoshada waxyaabaha kujira Disney + waa mid aad u deggan oo fudud oo wax looga qaban karo. Markaan galno filim ama taxane, waxaan u xakamayn karnaa taranka siyaabo kala duwan. Waxaa jira laba badhammo oo lagu muujiyey bartamaha shaashadda oo kuu oggolaanaya inaad hore ugu socoto ama aad dib ugu noqoto 10 ilbiriqsi dib u soo ciyaaridda, haddii ay dhacdo waxaan raadineynaa daqiiqad gaar ah taxanahaas ama filimka. Waxaan sidoo kale isticmaali karnaa barta ciyaarta oo ku taal salka hoose, kaas oo kuu oggolaanaya inaad si dhakhso leh ugu dhaqaaqdid waxa ku jira. Tayada taranka ayaa aad u fiican, in kasta oo ay qayb ahaan ku xiran tahay qadkaaga internetka. Markii la isticmaalayo WiFi oo lagu jiro meel leh calaamad ka sii daraysa, waxaa loo arkaa in tayadu si toos ah uga sii xumaato, waxaa la sameeyaa iyada oo aan wax laga qaban.
Waana la oggol yahay bedesho luuqada dib-u-ciyaarida oo ku dar qoraal hoosaadyo. Disney + waxay bixisaa afaf badan qaybtaan ugu dambeysay, sida Isbaanish, Ingiriis, Jarmal, Faransiis, Talyaani iyo Holandees. In kasta oo aysan ahayn wax lala yaabo in waqti ka dib la kordhiyo liiska luqadaha, maadaama madal laga bilaabi doono dalal kale maadaama hadda Ingiriisiga oo keliya uu muuqanayo. Si aad wax uga beddesho luqadda ama aad ku darto qoraal hoosaadyo, kaliya dhagsii badhanka midigta sare, kaasoo ah isla sumadda aan ku leennahay YouTube si aan ugu darno Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku darto qoraal-hoosaadyadan ama aad badasho luqadda ay ku qoran tahay waxyaabahaas.
Haddii waqti kasta aad daawanayso filim, laakiin ay tahay inaad baxdo, Disney + wuu xasuusan doonaa daqiiqada aad joogtay. Marka marka aad ku noqotid bogga filimkaas, halkii aad ka riix laheyd Ciyaarta, waxaad arki doontaa in batoon dhahaya Resume ayaa soo baxaya, si aad u sii wado tarankaas isla meeshii aad uga tagtay.
Sida caadiga ah codsiyada qulqulka Suuragal ma ahan in la qaado shaashadda goorta ay ku dhexjiraan taranka, sababtuna tahay xuquuqda lahaanshaha waxyaabaha kujira. Sawirada laga qaaday kiiskan waa inay muujiyaan kontaroolada dib ugu soo laabashada kiiskan, si fudud ulajeedooyin macluumaad ah.
Buugga macluumaadka ‘Disney’
Mid ka mid ah hubka weyn ee Disney + waa buugga liiskiisa filimaanta, taxanaha iyo dokumentiyo, halkaas oo aan ka helno waxyaabo ka kooban sagas oo ah sumcad aad u weyn sida Marvel ama Star Wars. Shaki la’aan waxaa jira laba ka mid ah awooda aaladdan, taas oo ka caawin doonta isticmaaleyasha badan inay helaan rukumad, maadaama la xaqiijiyay in waxyaabaha cusub la xiriira ilaa waqti ka waqti ayaa iman doona. Taxane cusub oo ku saleysan caalamiyadan.
Buug-yaraha kaas oo Disney + hadda loogu sii daayo suuqa Horaa u balaadhan yahay, oo ay kujirto dhagaystayaal wanaagsan. Waxaan horey u helnay aflaankii Marvel oo dhameystiran marka laga reebo Endgame. Marka lagu daro lahaanshaha taxanaha sagaalkan sidoo kale waa la heli karaa ama si loo arko isbeddelka waxyaabahaas iyo jilayaashaas sannadihii la soo dhaafay. Barxada waxaa sidoo kale ku jira filimaan ‘Disney’ oo caadi ah, sida nooca asalka ah ee The Lion King, Bambi, Beauty iyo The Beast iyo kuwo kaloo badan.
Waxa kale oo jira a Tiro badan oo asal ah oo taxane ah oo telefishanka Disney ah, aflaanta riwaayadaha ee ay kiciyaan dadka dhabta ah, taxane dokumentiyo ah oo loogu talagalay kuwa yaryar ama muusikada (oo ay ku jiraan Mary Poppins). Waxaan haynaa waxyaabo ka badan oo ku filan sii deyntan, laakiin anagoo xaqiijinayna in waqtigooda la ballaarin doono. Buug yar oo hubaal ah inay adkaan doonto in lala tartamo.
Markii aad soo dejineyso waxa ku jira, oo si aan xadidneyn loo sameyn karo haddii aad koonto leedahay, cutubyada taxanaha ah si gaar ah ayaa loo soo degsan karaa. Sidaa darteed haddii aad qorsheyneyso inaad fiirsato cutub gaar ah oo taxane ah, laakiin aadan dooneynin inaad kubixiso xogta ama batteriga adoo adeegsanaya WiFi, waxaad kala soo bixi kartaa cutubkaas oo keliya qalabkaaga qaab fudud. Xaaladda taxanaha waxaad arki doontaa in cutubyada oo dhan ay soo baxayaan oo ay midigta kuu siinayaan badhanka soo dejinta.
Hada uma muuqato inay muuqaalo badan oo dheeri ah ku jiraan Disney +. Waa nala ogolaaday ku dar waxyaabaha ku jira liiska, si loo abuuro liisaska taxanahan ama filimada aan rabno inaan ku aragno masraxa. Kaliya gal bogga filimkaas oo riix + badhanka ku xiga badhanka ciyaarta. Tan waxaa lagu daray liiskaaga liiska.
Qaybta astaanta guud, haddii aad gashid ikhtiyaarka dejinta dhinacyada qaarkood ee dalabka ayaa loo oggol yahay in la habeeyo, si gaar ah oo ku saabsan soo-dejistooda. Waa suurtogal in la go’aamiyo tayada soo dejinta (tayada sare, miisaanka weyn iyo waqtiga dheer ee ay qaadan karto), marka lagu daro xulashada goobta ay ku taal taleefanka. Waxaad sidoo kale arki kartaa booska ay ku jiraan waxyaabaha ku jira taleefanka oo aad tirtiri karto wixii aad soo dejiso si aad uga hortagto inay qabsadaan meel fara badan.
Adeegga qulqulka Disney + wuxuu la jaan qaadi doonaa Chromecast iyo Android TV Adeegga qulqulka cusub ee Disney + wuxuu la jaan qaadi doonaa aaladda Chromecast iyo TV-yada isticmaala Android TV.
Waqtigii loo isticmaalay Disney +, arjiga ma soo saarin ogeysiisyo (in kasta oo oggolaansho looga haysto Android). Lama oga in tani ay tahay wax ku meelgaar ah, maxaa yeelay waxaa laga bilaabay arjiga oo adeegsiga waqti kadib waxaa la arki doonaa sida ogeysiisyo badan loogu soo diro dalabka. Laakiin hadda wax ogaysiis ah oo arrintan la xiriira ma jiraan, taas oo dad badani uga dhigaan adeegsiga codsiga mid aad u deggan waqti kasta.
Sida aad arki karto, adeeg sifiican u shaqeynaya, oo leh buugga macluumaadka xiisaha leh laakiin taasi waxay ku qasbanaan doontaa in badan ay la dagaallanto si ilkaha looga sameeyo.